▷Uyihlawula njani imali-mboleko? | Ulwazi NGOKU【 2022】
Iipensile zoomatshini kunye neepensile
Iimpawu zokuMakisha kunye neeRoller
Iipasile kunye namaKhadi oShishino
Izinto zokubambelela kunye neetheyiphu zokubambelela
Amacandelo kunye nabalawuli kunye nezikwere
Iincwadana kunye neencwadana
Iintambo, iiadaptha kunye nemicu
Ukuphawula nokubhala oomatshini
AbaGcini zincwadi kunye nokuKhusela iMali
Umboniso, iiMiboniso kunye neeRacks
Izileyiti kunye neBhodi yoLungiso
Indlela yokuhlawula imali mboleko?
1 i-mortgage amortization
1.1 i-inshurensi yetayitile
1.2 Forbes Advisor
1.3 IKhatyhuleyitha ye-Mortgage yeeVeki ezimbini
Cinga ngetyala elihle ngolu hlobo: Intlawulo nganye oyenzayo iyakwandisa ubunini be-asethi, kule meko ikhaya lakho, nangaphezulu. Kodwa ityala elibi, njengeentlawulo zekhadi letyala? Elo tyala lelezinto osele uzihlawulele kwaye mhlawumbi ozisebenzisayo. Awuyi kuba "ngumnikazi" wee jeans, umzekelo.
Kukho omnye umahluko ongundoqo phakathi kokuthenga ikhaya nokuthenga izinto ezininzi neenkonzo. Amaxesha amaninzi, abantu banokubhatala imali ngezinto ezifana nempahla okanye izinto zombane. “Uninzi lwabantu bebengakwazi ukuhlawula imali yendlu,” utshilo uPoorman. Loo nto yenza ukuba imali-mboleko iphantse ibe yimfuneko ukuthenga indlu.
Uqokelela imali eyongileyo yomhlalaphantsi. Ngenzala ephantsi kakhulu, "ukuba ubeka imali obuya kuyisebenzisa ukuhlawula imali mboleko kwi-akhawunti yomhlalaphantsi, imbuyekezo yexesha elide inokugqithisa ukugcinwa kokuhlawula imali mboleko," utsho uPoorman.
Icebiso: Ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ukwazi ukuhlawula imali-mboleko ngokukhawuleza kwaye ingcamango ihambelana nemali yakho, cinga ukufudukela kwishedyuli yokuhlawula i-biweekly, ujikeleze inani elipheleleyo olihlawulayo, okanye wenze intlawulo eyongezelelweyo ngonyaka.
Ukuhlawula imali-mboleko yakho kwangethuba kunokukunceda uzinzo kwezemali, kwaye unokonga imali ekuhambeni kwexesha ngokwenza inzala encinci. Nazi ezinye zeendlela onokuthi uhlawule ngokukhawuleza imali yakho yokubambisa:
Enye indlela yokugcina imali kwinzala, ngelixa unciphisa ixesha lokuboleka imali, kukwenza iintlawulo ezongezelelweyo ze-mortgage. Ukuba umbolekisi wakho akahlawulisi sohlwayo sokuhlawula imali mboleko yakho kwangethuba, qwalasela ezi ndlela zilandelayo zokuhlawula imali-mboleko yakho kwangoko.
Khumbula nje ukwazisa umbolekisi wakho ukuba iintlawulo zakho ezongezelelweyo kufuneka zifakwe kwinqununu, kungekhona inzala. Ngaphandle koko, umbolekisi angasebenzisa iintlawulo kwiintlawulo ezicwangcisiweyo zexesha elizayo, ezingayi kukugcina imali.
Kwakhona, zama ukuhlawula kwangethuba kwimali-mboleko, xa inzala iphezulu. Usenokungayiqondi, kodwa uninzi lwentlawulo yakho yenyanga kwiminyaka embalwa yokuqala iya kwinzala, hayi inqununu. Kwaye inzala iyadityaniswa, nto leyo ethetha ukuba inzala yenyanga nganye imiselwa sisixa-mali esityalwayo (inqununu nenzala).
Ukuhlawula imali-mboleko yakho kwangoko kunokukunceda wonge amawaka eedola kwinzala. Kodwa ngaphambi kokuba uqale ukuphosa isixa semali kwelo cala, kuya kufuneka uqwalasele izinto ezimbalwa ukuze ubone ukuba lukhetho olufanelekileyo.
Ngalo lonke ixesha uhlawula i-mortgage, yahlulahlulwe phakathi kwenqununu kunye nenzala. Uninzi lwentlawulo luya kwinzala kwiminyaka embalwa yokuqala yemboleko. Uya kuba netyala lenzala encinane njengoko uhlawula inqununu, isixa semali obuyibolekile ekuqaleni. Ekupheleni kwemboleko, ipesenti enkulu kakhulu yentlawulo iya kwinqununu.
Unokufaka iintlawulo ezongezelelweyo ngokuthe ngqo kwibhalansi yenqununu ye-mortgage. Iintlawulo ezingundoqo ezongezelelweyo zinciphisa isixa semali oya kuyihlawula kwinzala ngaphambi kokuba inzala ibe nokwanda. Oku kungathatha iminyaka kwithuba lakho lokubambisa kwaye kukugcine amawaka eedola.
Masithi uboleka i-150.000 yeedola ukuze uthenge indlu enenzala eyi-4% kunye nexesha leminyaka engama-30. Xa uhlawula imali-mboleko, uya kuba uhlawule inzala eyi-107.804,26 yeedola. Oku kongezwa kwi-150.000 yeedola oqale wayiboleka.
IKhatyhuleyitha ye-Mortgage yeeVeki ezimbini
Unokukwazi ukwandisa iintlawulo zakho kuphela ngesixa esithile ngonyaka. Khangela isixa esithile kwikhontrakthi yakho yokubambisa. Ukuba unyusa iintlawulo zakho ngaphezulu kwelungelo lokuhlawula kwangaphambili likuvumela, kungafuneka uhlawule isohlwayo.
Ngokuqhelekileyo, xa unyuse iintlawulo zakho, awukwazi ukuzinciphisa kude kube sekupheleni kwexesha. Ixesha lixesha lekhontrakthi yakho yokubambisa, kubandakanywa izinga lenzala kunye nezinye iimeko. Ixesha linokuhluka ukusuka kwiinyanga ezimbalwa ukuya kwiminyaka emi-5 okanye ngaphezulu.
Abanye ababolekisi bemali-mboleko banokukuvumela ukuba wandise ubude bemali mboleko yakho ngaphambi kokuba ixesha liphele. Ababolekisi babiza olu khetho lohlaziyo kwangethuba ngokuba ludibaniso kunye nokwandisa ukhetho. Bakwenza oko ngenxa yokuba inzala yabo endala kunye nekota entsha ixutyiwe.
Mhlawumbi unomdla kwi:
Ngaba kungcono ukuthenga indlu nge-mortgage okanye ngaphandle kwe-mortgage?
Yintoni engcono eguquguqukayo yokubambisa okanye i-mortgage okanye esisigxina?
Ngaba kungcono ukwandisa i-mortgage okanye i-mortgage entsha okwesibini?
ngaphandle kokubambisa imali kwaye ngaphandle kokukwazi ukubhalisa umbane
Indlela yokufumana imali yokubambisa kakuhle?
Ngubani onoxanduva lweendleko ze-apreyizali kwi-mortgage?
Ngawaphi amagqwetha ukubanga iindleko zokubambisa ngezimvo zaseMadrid?
Uzenza njani ibango leendleko zokubambisa eValencia?
izigaba Izibambiso Ukuhamba kwetikiti
Ndingayisa imali-mboleko kwenye ibhanki?
Ngaba kunyanzelekile ukuthatha i-inshurensi engahlawulelwayo kwi-mortgage?
Eminye kwiPirlo TV yasimahla
Ukujonga phi ifomula 1 kwaye simahla
Ezinye iindlela zekhadi elibomvu
Ezona ndlela zibalaseleyo kwi-Elitegol
Uyiprinta njani itikiti likaRenfe kuphela kunye nendawo esikuyo
Ezinye iindlela zokukhuphela iincwadi kwiincwadi zeXYZ zasimahla
IZiko loKhuseleko lwezeNtlalontle (i-INSS) lazisa njani ngokuSebenza ngokuNyanga?
Apho ubukela khona i-UEFA Champions League kwi-intanethi kwaye simahla
Iindlela ezizezinye kwiRojadirecta
Olona khetho lubalaseleyo kwiLa casa del Tiki Taka
Wazi njani ukuba uhlawula irhafu yendlela?
Chaza isixa semali esasifunyenwe ngaphambili njengomsebenzi okhubazekileyo
Ezinye iindlela zasimahla kwi-Espaebook ngo-2021
Eyona Youtube inguqulelo yeMP3 kunye neeMP4
Olunye uhlobo olulungileyo kwiMejorTorrent
Olunye ukhetho kwiNewpct1 yokukhuphela iimovie
Ndiyazi njani ukuba ingakanani ingqesho endiyifumeneyo?
Iindlela ezizezinye kwi-FutbolArg
Ibalwa njani isalathiso sokuhlaziywa kweziseko zegalelo?
Uluhlu oluGqwesileyo lweWiseplay Lists 2020
izigaba Khetha udidi Izixhobo zekhompyuter Iijenda Iindlela ezizezinye Iibhloko BLOG Iipeni Iintambo, iiadaptha kunye nemicu Amacandelo kunye nabalawuli kunye nezikwere AbaGcini zincwadi kunye nokuKhusela iMali Ulawulo lokufikelela Izinto zase-ofisini Iincwadana zeRubio iincwadi zokubhala kunye neencwadana Abonakalisi IMFUNDO Oomatshini ababophelelayo Amatyala Iilebula Umboniso, iiMiboniso kunye neeRacks IiNtshonos Izibambiso Ngumntwana Imidlalo yebhodi LEGAL Iincwadi Iincwadi zika-Anaya Imisebenzi yezandla IMaphu Abamakishi Izinto zeMinyaka emi-2 Izinto zeMinyaka emi-3 Izinto zeMinyaka emi-4 Izinto zeMinyaka emi-5 Izinto zeMinyaka emi-6 Unikezo lwe-ofisi Iitafile zeOfisi Izingxobo zangasemva Ifenitshala Amantombazana Bantwana Izaziso Umhleli Papel Iipasile kunye namaKhadi oShishino Izinto zokubambelela kunye neetheyiphu zokubambelela Izileyiti kunye neBhodi yoLungiso Udongwe Iipensile zoomatshini kunye neepensile iphazili Ukuphawula nokubhala oomatshini Iimpawu zokuMakisha kunye neeRoller Izitulo zeofisi A ngahlali Iimvulophu neeNgxowa Iincwadi zokutshekisha Umabonwakude
Isaziso sokwenza imali:
lainformación.com ivelisa iikhomishini kwinethiwekhi yamaqabane eAmazon. Xa ezi zinto zithengisiwe kwaye zinobudlelwane neAmazon, yindlela yokufumana iikhomishini
Ngaphambi kokuqeshwa koKhuseleko lweNtlalo
Imserso kunye neemfuno
Cela ubomi bomsebenzi kwi-intanethi nangeSMS
Ingakanani imisebenzi endiyifumeneyo
Ulwazi ngoku - Sitemap | Isilumkiso sezomthetho